January 01, 2017 – Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxaa maanta lagu doortay Sadex Xildhibaan oo kamid noqondoona Aqalka hoose ee Baarlamaankafederaalka, Xildhibaanadan la doortay maanta ayaa kasoo jeeda Beelaha dega deegaanada Somaliland.
Xildhibaanada maanta lagu doortay magaalada Muqdisho waxaa kamid ah Xildhibaanad Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan oo hore uga tirsaneyd Baarlamaankii hore horeyna usoo noqotay Wasiirada Arimaha Dibadda ee dalka Soomaaliya.
Fowsiyo Yuusuf Xaaji ayaa heshay codad gaaraya ilaa 45 cod, waxaana sidaasi ay uga guulaysatay xildhibaankii la tartamayay.
Waxaa sidoo kale maanta ka mid noqday Aqalka hoose ee Baarlamaanka, Muuse Ismaaciil jaamac oo helay 48 cod, waxa uuna ka guuleestay gabar la tartameysay oo lagu magacaabo Faadumo Cismaan Nuur.
Kursiga sedexaad ee maanta lagu doortay magaalada Muqdisho ayaa waxaa kusoo baxay C/fitaax Ismaaciil Daahir oo helay 46-cod, waxaana uuna ka guuleestay Musharaxiin kursigaasi kula tartameysay uu ku jiro Ra’isul Wasaare kuxigeenkii hore Soomaaliya Ridwaan Xirsi Max’ed.
Doorashada Xildhibaanada Aqalka hoose ku matalaya beelaha dega gobolada Waqooyi ee Soomaaliya ayaa la filayaa in dhawaan lasoo gaba gabeeyo, waxaana wali harsan doorashada dhoor kursi oo kamid noqon doona Aqalka hoose.